Ikusasa Leselula | Martech Zone
Njalo ezinsukwini ezimbalwa, mina nendodakazi yami siyaxabana ngokuthi ubani onentambo yokushaja. Ngifisa intambo yami futhi ujwayele ukushiya intambo yakhe emotweni yakhe. Uma izingcingo zethu zombili zingaphansi kwamaphesenti amashaji wedijithi eyodwa… qaphela! Amafoni ethu abe yingxenye yomuntu wethu. Kuyizicubu zethu zokuxhuma kubangane bethu, imemori rekhoda yethu yamanje, umngane wethu okusikhumbuza ukuthi yini okufanele siyenze ngokulandelayo, ngisho ne-alamu yethu yokuvuka ekuseni. Lapho ifa, sizizwa silahlekile ehlane. 🙂
Likuphatheleni ikusasa? Ngokubona kwami, ideskithophu, ilaptop ngisho nethebhulethi kuzonyamalala ezimpilweni zethu futhi sonke sizomane sibe nezingcingo zethu. Njengoba sihlala phansi emsebenzini, sizomane sikhiphe ifoni yethu bese siyibuka esikrinini esitholakalayo esiphambi kwethu… njenge-Airplay ene-AppleTV isebenza manje. Izingqinamba zokufaka izintambo, ukufaka ikhebula, ukuvumelanisa, njll. Konke kuzobe kungasekho, sonke sizosebenzisa ithelevishini yethu, umsakazo wethu, izimoto zethu nakho konke okunye ngocingo lwethu. Izinkampani zokusakaza nezentambo zizonyamalala njengoba ifoni ephathekayo iba ngumgogodla wakho konke ukuxhumana kwethu. Izikhwama zizonyamalala njengoba ukuhlonza kwethu kungaqinisekiswa ngedivayisi yeselula.
Ngethemba, phakathi kwalesi sikhathi bese sithola ukuthi singayandisa kanjani impilo yamabhethri kumadivayisi ethu, sisheshise izikhathi zokushaja kanye / noma nokushaja kokungeniswa (okungenantambo)… ukuze mina nendodakazi yami singalwi ngentambo yeshaja!
Lokhu infographic kusuka kuThathu kusinikeza amazwibela esikhathi esizayo esiseduze sokwamukelwa kweselula!
Tags: 2014201520162017NgokuzayoInternationalUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukukhula kweselulaizibalo zeselulaUkubikezelasmartphoneizwe